တိုး Poke နေ့စဉ်: မက်ဆီရော်နယ်ဒိုလက်ခံ - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » အားကစားများ "တိုး Poke နေ့စဉ်: မက်ဆီရော်နယ်ဒိုလက်ခံ
တိုး Poke နေ့စဉ်: မက်ဆီရော်နယ်ဒိုလက်ခံ
အဆိုပါတိုး Poke နေ့စဉ်သတင်းစာသင်တို့ရှိသမျှသည် strangest ပုံပြင်များ, အများဆုံးထူးထူးဆန်းဆန်းဗိုင်းရပ်စ်အကြောင်းအရာနှင့်တစ်နေရာတည်းတွင်အင်တာနက်ကို၏မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်လှုပ်ရှားမှုရောက်စေဖို့နေ့တိုင်းရရှိနိုင်ပါသည်။
Jump to: အသစ်ဘာစီလိုနာကိရိယာအစုံစီရော်နယ်ဒိုအားဖြင့်မှုတ်သွင်းနေသည် - မမတဦးတည်း | ကီဗင်-မင်းသား Boateng သူကိုတနေ့သုံးကားများဝယ်ယူဝန်ခံသည်
Lionel Messi နှင့်စီရော်နယ်ဒိုမကြာမီနှစ်ယောက်စားပွဲတစ်ခုဝေမျှနိုင်ပါတယ်။ Harold Cunningham - ယူအီးအက်ဖ်အေ / ယူအီးအက်ဖ်အေ Getty Images ကနေတဆင့်
အဆိုပါဘာစီလိုနာကြယ်ပွင့် Lionel Messi လက်ခံ မိမိအကြီးမြတ်ပြိုင်ဘက်များ၏ညစာဖိတ်ကြားချက်ကို ဂျူဗင်တပ်စ်တိုက်စစ်မှူး စီရော်နယ်ဒို .
သူတို့ကယူအီးအက်ဖ်အေချန်ပီယံလိဂ်အတွက်မိုနာကိုမှာပထမဦးဆုံးမဲနှိုက်ပွဲစဉ်အတွက်လာမယ့်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားမှထိုင်ကြစဉ်တွင်ရော်နယ်ဒိုရှိနေသော်လည်းထက်ပိုဆယ်နှစ်မြောက်မြားစွာ Gala မှာဇာတ်စင်မျှဝေကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်သူတို့ အတူတူပေါင်မုန့်ကျိုးပဲ့တစ်ခါမျှ
"ကျနော်တို့ကအကောင်းဆက်ဆံရေးရှိသည်, ကျနော်တို့အတူတူညစာစားခဲ့ကြပြီမဟုတ်ပေမယ့်ငါအနာဂတ်အတွက်မျှော်လင့်ပါတယ်," ရော်နယ်ဒိုကြီးမြတ်လက်ခုပ်သံတို့သည်မိုဃ်းပရိသတ်ကိုထံမှကဆိုသည်။
ပေါ်ပေါက်ပါတယ်။ ရှားရှားပါးပါးအင်တာဗျူးအတွက် အားကစား မိမိအသောထာဝရပြိုင်ဘက်သွေးခွဲလိုင်းအထက်တွင်တစ်ခုသံလွင်ခက်တိုးချဲ့ပြီးမှယခုတပတ်မက်ဆီရော်နယ်ဒိုနှင့်အတူသူ၏ဆကျဆံရေးသို့ဖိခဲ့ပါတယ်။
"ကျနော်တို့ကိုတောင်အတူတူ Locker အခန်းတစ်ခန်း shared ဘယ်တော့မှဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျနော်တို့မိတ်ဆွေတွေနဲ့မဟုတ်ပေမယ့်ကျွန်တော်အမြဲ Gala ကိုရှာဖွေကျနော်တို့ပြောဆိုငါတို့စပ်ကြားမျှပြဿနာလုံးဝလည်းမရှိ" ဟုအဆိုပါအာဂျင်တီးနားအသင်းခေါင်းဆောင်ကဆိုသည်။ ကျနော်တို့အများဆုံးစကားပြောသည့်အခါကျနော်တို့အတူတကွအရှိဆုံးအချိန်ကုန်သောကွောငျ့ "ဒါက [အတွက်ယူအီးအက်ဖ်အေချန်ပီယံလိဂ် Gala ဆွဲ] ဖြစ်ခဲ့သည်။
ကျနော်တို့နှစ်ဦးစလုံးတစ်ဦးအလုပ်ရှုပ်ဘဝကိုရှိသည်နှင့်ကျနော်တို့ကသူတို့ကိုကိုက်ညီနိုင်လျှင်မသေချာဘူး, ဒါပေမယ့်ငါကသူ့ညစာဖိတ်ကြားချက်ကိုလက်ခံမျှပြဿနာရှိသည်ကြောင့်ကျနော်တို့အတူတူအစာစားပါလိမ့်မယ်ဆိုပါက "ကျနော်မသိရပါဘူး။ "
nice ပါ, လီယို, သင်မူကားအဖြစ်လွယ်ကူစွာဒီလူမှုရေးကတိကဝတ်စိတ်ထဲမထားပါဘူး။
- Marcotti အဘယ်ကြောင့်မက်ဆီနှင့်ရော်နယ်ဒို၏ပရိသတ်များကအမြဲသူတို့တိုက်ခိုက်နေကြသလဲ
ဒါဟာသင်သည်သူတို့နောက်ဆုံးတော့နှစ်ခုအဘို့မိမိတို့စားပွဲ၌ရောက်လာသည့်အခါသူကမီနူးရှိသည်မယ်လို့အဘယ်အရာကိုစဉ်းစားစေသည် - la Pulga ဂျုံ? " Siiiiuu! "အောက်ပိုင်း? ဂျမေကာဟင်းဆိတ်သငယ်?
မက်ဆီပါလျှင်အားကစားကိုလည်းကောင်းစွာ, Lionel Messi ဖြစ်ခြင်း၏ပင်ပန်းမေးတယ်။ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးရွှေဘောလုံးဃ '' ဒါမှမဟုတ်ဆုရှင်ကမှန်မှန်တကယ်အရုဏ်၏လေဖြတ်၏အမြင့်မှထပုံမပါဘဲပရိသတ်တွေအားဖြင့်ချဉ်းကပ်ရင်တောင်, မိမိအသက်ကိုမဆိုရှုထောင့်နှင့် ပတ်သက်. တိုင်ကြားဖို့ငြင်းဆန်။
"အဘယ်သူမျှမကျနော်ကံကောင်းထောက်မစွာပင်ပန်းမရကြဘူး, ငါထူးဆန်းတဲ့နှင့်အံ့သြဖွယ်အမှုအရာတွေအများကြီးရှိသည်နှင့်အလွန်ကောင်းတဲ့ရဲ့" အဖြေကိုပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။ "ဒါဟာကျွန်မသတိမပြုမိကြပြီမယ်လို့မှန်သည်။ ငါကျောင်းမှာဒါမှမဟုတ်လမ်းပေါ်၌ငါ့ကလေးတွေနှင့်အတူပေါ့အထူးသဖြင့်အခါ။
"ငါသည်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ကျောင်းကို 8 30 ညနေမှဦးဆောင်သူတို့တစ်ကိုယ်တိုင်ရေးလက်မှတ်ရဖို့သို့မဟုတ်ငါနှင့်အတူပါတဲ့ပုံတစ်ပုံကို ယူ. ငါတကယ်အိပ်ချင်နိုင်မယ်ဆိုရင် [ပရိသတ်တွေအားဖြင့်] ငါ့ကိုမေးတယ်။ သို့သော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါဘာမှအကြောင်းကိုတိုင်ကြားလို့မရပါဘူး။ "
- ESPN Fantasy ဘောလုံး: ယခုမှတ်ပုံတင်မည်!
- ကံကောင်းအညွှန်း: စီးတီးသူတတျနိုငျသ
- ESPN Ultimate XI: ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိပ်မက်အသင်းအရာအားလုံးကိုအနိုင်ရမယ်လို့!
ရော်နယ်ဒိုအားဖြင့်မှုတ်သွင်းအသစ်ဘာစီလိုနာကိရိယာအစုံ - မမတဦးတည်း
- ဥရောပအတွက်အကြီးမားဆုံးကလပ်အသင်းများအတွက်အားလုံးအသစ်က 2019-20 ပစ္စည်းများ
စခန်း Nou မှာမိမိနေထိုင်စဉ်အတွင်း, မိမိနေထိုင်အကျဉ်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ရော်နယ်ဒိုကလပ်ဒဏ္ဍာရီ၏များပြားလှအကြားတွင်နေရာတစ်နေရာဝင်ငွေဖို့ 47 49-ရာသီအတွင်းဘာစီလိုနာအဘို့အ 1997 98 ပွဲအတွက်ဂိုးသွင်း။
ဂုဏ်အသရေအတွက် အို Fenomeno အဆိုပါCatalàကျနော်တို့ကမ္ဘာ့ဖလားအနိုင်ရသူကိုဘရာဇီးတိုက်စစ်မှူးနှင့်အတူပြောရလျှင်ဖြစ်လာသည်သောအထင်ကရတီးဝိုင်းစိမ်းပြာနောက်ကျောကိုဆောင်ခဲ့၏။
- သငျသညျစီးတီးရှိ Kompany ရဲ့အစမှာ XI ခန့်မှန်းနိုင်မလား
- '' မသက်ဆိုင်ဘဲမူလ! ' ဖီဖာအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ဆန့်ကျင်ဒေါသထွက်နေတဲ့ကြယ်ပွ 20
ကီဗင်-မင်းသား Boateng သူကိုတနေ့သုံးကားများဝယ်ယူဝန်ခံသည်
ကီဗင်-မင်းသား Boateng - သင်တစ်ဦး Lambo အတွက်ကြည့်ရှုနိုငျပါသညျ။ Getty
ကီဗင်-မင်းသား Boateng သူသည်သူ၏ကစားသမားဘ၏အစအဦးမှာမပျော်ခဲ့သည့်ကာလအတွင်းစပါးမှာမိမိအချိန်ကာလအတွင်းတနေ့ခြင်းတွင်သုံးကားများဝယ်ယူခဲ့ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ အဆိုပါဂါနာလူမျိုးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ 2009 အတွက်ပို့စ်မောက်သို့ပြောင်းရွှေ့ခံရဖို့သူ့ကိုရရှိခဲ့ရာဝှိုက်ဟတ်လိန်းမှာနှစ်ခုပူပရာသီရှိခဲ့ပါတယ်။
ပြန်ပြောင်းကြည့်ရမည်ဆိုလျှင်, Boateng သည်သူ၏အပြုအမူ "မိုက်မဲ" ခဲ့ပေမယ့်ကြီးမားတဲ့တစ်ခါသုံးဝင်ငွေနှင့်အလိုတော်မှာဖြုန်းဖို့အခမဲ့အချိန်အများကြီးနှင့်အတူ၎င်း၏တစ်ဦးအထီးကျန်ငယ်ရွယ်ဘောလုံးသမားနောက်တော်သို့လိုက်ကြောင်းဝန်ခံသည်။
"ကျွန်မအနေနဲ့လူထုံခဲ့သည်။ ကျွန်မအလုပ်နဲ့တူဘောလုံးမဆကျဆံခဲ့ဘူး "32 နှစ်ပေါင်းကစားသမားကပြောပါတယ် la Repubblica ။ "မြေပြင်ပေါ်တွင်တစ်နာရီ, ငါသည်အခွက်တဆယ်ခဲ့ပေမယ့်ငါနိမ့်ဆုံးမှလေ့ကျင့်သင်ကြား။ ငါရောက်လာသောမှနောက်ဆုံးအကြီးသွားကြဖို့ပထမဦးဆုံး။ ကျွန်မသူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူလိမ့်မည်။
"ကျွန်မပိုက်ဆံခဲ့ငါရှင်ဘုရင်ကဲ့သို့အသက်ရှင်။ , ငါအားကစားရုံမရောက်ဖူးခဲ့သည်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြောင်းလဲစေပါသည်။ တစ်ဦး Lamborghini ကတစ် Hummer နှင့် Cadillac: ငါစပါးမှာတုနျးက, ငါသည်တနေ့ခြင်းတွင်သုံးကားများဝယ်ယူခဲ့သည်။ "
Boateng - မိမိ 11 ကလပ်အသင်းအကြားဘာစီလိုနာ, AC Milan နဲ့ဒေါ့မွန်တို့ပါဝင်သည်ရာ - သူတို့ရဲ့သင်တန်းဆုံးရှုံးအန္တာရာယ်အဘယ်သူသည်ငယ်ရွယ်ကစားသမားသည်ယနေ့အဘို့သတိပေးအနည်းငယ်ရွေးချယ်မှုစကားလုံးများကိုပူဇော်ကြ၏။
အဆိုပါကွင်းလယ်လူသည်ယခု Fiorentina မှာက "လူငယျအဘို့, ငါသည်ထိုသူတို့ကိုပြောပြ:" သင်ပျော်ရွှင်မှုကိုမဝယ်နိုင်ပါ။ "ကျွန်မကစားကြပြီမဟုတ်, ငါအဖွဲ့ထဲကဖြစ်ခဲ့သည်မိသားစုပြဿနာများ, ရှိခဲ့ပါတယ်။
"ငါသည်ပစ္စည်းအရာရာ၌ပျော်ရွှင်မှုကိုရှာနေခဲ့သည်: တစ်ကားကိုတစ်ပါတ်ဘို့သင့်ကိုပျော်ရွှင်စေသည်။ ငါသုံးပတ်အဘို့အပျော်ရွှင်ဖြစ်သုံးဝယ်ယူခဲ့သည်။ "
ဤဆောင်းပါးတွင်ပထမဦးဆုံးပေါ် (အင်္ဂလိပ်လို) သည်ထင်ရှား http://espn.com/soccer/blog-the-toe-poke/story/3941016/toe-poke-daily-messi-accepts-ronaldos-dinner-invitation
အဆိုပါစျေးမှာဘိုင်ယန်ရှေ့တော်၌ထိုအသစ်သောနည်းပြနှင့်အတူ Leipzig အတွက်ရည်မှန်းချက်ကြီးနွားလား
မိုဒရစ်ဒဏ်ရာရခြင်းနှင့် PSG အသင်းနှင့်မက်ဒရစ်အကြားတိုက်ပွဲများလက်လွတ်စေခြင်းငှါ
Inde: Amit Shah cite Ramayana pour avertir des conséquences de la guerre | Inde Nouvelles